Fanekem-pihavanana Vaovao — Trip LEE - OFISIALY SITE
Ataoko mozika ho velona. Ary raha maro aminareo koa fantatrareo, ny karazana mozika ataoko dia kely kokoa noho ny hira hafa izay mety ho renao amin'ny CHBC fanompoana. Misy zavatra maro mikasika ny valahana hop izahay izay manao hafa noho ny hafa izany karazan-dahatsoratra ny mozika. Zavatra iray izay tsy manan-tsahala ny valahana hop izahay, fa fahita matetika dia ny remix.
Inona no matetika mitranga amin'ny Remix dia maka hira ianao efa nanao ary mamerina izany. Mitandrina ny sasany singa avy tany am-boalohany, fa ny sasany ihany koa ny manova ny zavatra mba hanisy namoly vaovao eo amboniny. Noho izany dia mety manampy tononkira vaovao, na iray manontolo gadona vaovao, na marina ny fomba hafa ho toy izany. Fa ny iray amin'ireo tanjona dia ny hanome ny mpihaino zava-baovao ary na dia hanatsara ny hira.
Tsara ny Fanekem-pihavanana Vaovao, izay ny andinin-teny miresaka momba ny anio alina, dia efa tahaka ny remix. Lazaiko fa satria mampanantena Andriamanitra mba hanaovako fanekena vaovao amin'ny ny vahoakany, fa ny zava-drehetra momba izany dia tsy vaovao. Ny toetrany Tsy miova, Ny fampanantenany Tsy niova, Ny ankapobeny fikasana tsy niova. Fa misy ny zavatra sasany momba izany fanekempihavanana izay hafa tanteraka. Ary noho ny fahotana, ny fanekena taloha tsy miasa. Ary noho izany, Andriamanitra nihatsara izany amin'ny vaovao iray. Tsy ny drafitra B, fa Izy nanomana teny ampandehanana mba hanaovako fanekena vaovao fa ny Zanany no hitondra ny. Ary mamaky isika momba io Fanekem-pihavanana Vaovao ao amin'ny Jeremia 31.
Mamelà ahy hanome anareo fototra vitsivitsy talohan'ny mamaky ny andinin-teny.
ao amin'ny Eksodosy, rehefa ny olona no nampahory sy andevozin'ny ny Ejipsianina, dia mitaraina aminy noho ny fanafahana. Ary mamonjy azy tamin'ny fomba mampivarahontsana tokoa tamin'ny loza folo ary nitodika nanatrika ny fon'i Farao, ary niantsoany ny Ranomasina Mena. Rehefa Andriamanitra namonjy ny olona Isiraely, Manao fanekena taminy. Hoy izy, "Koa ankehitriny,, raha hihaino ny feoko tokoa ka hitandrina ny fanekeko, dia ho rakitra soa ny firenena rehetra…" (fifindra 19:5). Mampahatsiahy azy ireo ny zavatra nataony ny ho azy. Izy no manome azy ireo 10 didy hoe izy no manaraka. Mampanantena Andriamanitra fa hitahy azy ireo, raha dia manaiky Azy, ary hanozona azy raha tsy hankatò Azy. Ary ny olona hanaiky izao fanekena sy hanao fianianana ny hankatò an'Andriamanitra.
Toa tsara be? Fotsiny hanao izay Hoy izy sy ny zava-drehetra ho tsara. Ho vonona ny rakitra soa, Ho azy ireo Izy hitahy, ary Ho velona mandrakizay amim-pifaliana rehefa. Ny olana dia tsy nihaino Azy. Tsy nitandrina ny ny lafiny ny fifanarahana. Ary toy izany no ahitantsika ny tenantsika tamin'ny andron'i Jeremia.
Ny bokin'i Jeremia dia voalohany indrindra ny boky momba ny fitsarana. Ny ankamaroan'ny boky dia Andriamanitra niteny mafy ny olona tamin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia noho ny tsy fankatoavany, ary ny faminaniana momba ny fandringanana. Fa misy kely fizarana (30-33), izay ny teny dia hita ankehitriny, izay Andriamanitra manome toky azy ireo ny amin'ny fanoloran-tena ho azy ireo, na dia eo aza ny fikomiana, ary Naminany ny fitahiana Izy no hampidinako azy. Indray andro rehefa afaka izany rehetra izany fandringanana, Izy no handeha hamerina azy ireo. Ary nilaza tamin'izy ireo io Fanekem-pihavanana Vaovao dia ny mandeha manao aminy. Ary izay no isika dia handeha ho any mieritreritra ny amin'izao andro izao. Betsaka ireo, zavatra maro izay azontsika momba ny Fanekem-pihavanana Vaovao, fa isika dia handeha hifantoka andininy iray io maraina.
Henoy izay lazainy.
"Izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'Israely, rehefa afaka izany andro izany,"Hoy ny Tompo. "Ahy dia hataoko ao an-mindsand lalàna hosoratako ao am-pony.
Izaho ho Andriamaniny,ary izy ho oloko. " (Jeremiah 31:33)
Fotsiny aho te-hanondro ny zavatra efatra tokony ho velom-pankasitrahana noho ary hidera an'Andriamanitra noho isika rehefa misaintsaina andinin-teny ity.
I. Andriamanitra dia miasa iraisam-pirenena
Hoy ny andinin-teny, "Izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'Isiraely…" Re toy ny zava-pirenena marina? Koa ahoana no lazaina fa ny Fanekem-pihavanana Vaovao dia Andriamanitra no miasa iraisam-pirenena?
Tsara ao amin'ny Eksodosy Andriamanitra no hanao fanekena amin'ny Isiraely olony. Ary tamin 'ny teny manodidina ny bokin'i Jeremia, io fifanekena vaovao ihany koa, rehefa natao ny firenen'ny Israely. Misy fanazavana mazava fa Andriamanitra nikasa ny hanao asa ivelan'ny Isiraely, fa tamin'ny fotoana izao dia manao ny fampanantenana mivantana ho any amin'ny firenena amin'ny Isiraely tokony ho namerina azy ireo.
Ary rehefa tonga any An-tany i Jesosy, Dia mazava tsara ny mifantoka amin'ny Jiosy. ao amin'ny Matio 15:24, hoy i Jesosy, "Tsy nirahina Aho afa ho any amin'ny ondry very amin'ny taranak'Isiraely." Fa mazava ho azy ny olona Isiraely mandà Azy sy ny faran'ny ny Filazantsaran'i Matio, Ny drafitra mazava. Hoy izy mba 'hanao mpianatra,"Tsy hoe Isiraely, fa amin'ny firenena rehetra.
Ary hitantsika fa toy izany mazava tsara ao amin'ny Asan'ny Apostoly sy ny Testamenta Vaovao, fa ny asan 'ny famonjena ny mpanota dia nitatra. Mihitsy aza izy mandefa ny tsy ampoizina indrindra Apôstôly, Paul, mba manokana amin'ny jentilisa. Ny mifantoka intsony amin'ny vahoaka pirenena, fa ny olona iraisam-pirenena.
Ary tokony hidera an'Andriamanitra noho izany! Tsy misy olona mendrika ny ho voavonjy, ary indray amin'Andriamanitra, ka tsara fanahy izy mba hanavotra ny olona amin'ny Isiraely. Ary Izy mbola hamindra fo amin'ny alalan'ny fanomezana ny famonjena ho antsika rehetra. Tena efa toy ny olona maty ny hetaheta, ary olona iray ihany no manana rano. Ary tamin'ny voalohany dia nijery ihany tahaka ny rano azo amin'ny ankizy. Fa avy eo isika mahita ny rano tsy ampy ho antsika rehetra. Tena lehibe ny ankizy fa afaka ho voavonjy, Fa ankehitriny dia mahita isika rehetra no afaka. Ny tena fomba fanoharana io mianjera fohy dia mendrika antsika ho faty ny hetaheta. Fa Andriamanitra-katsaram-panahy Manampy antsika rehetra ny famonjena izay ilaintsika.
Heveriko fa tsara tarehy aho mazava tsy ny Jiosy taranaka. Ny sasany amintsika eto izao hariva izao. Heveriko fa azo antoka ny milaza fa ny maro amintsika eto dia tsy Jiosy. Ka ho an'ny sasany amintsika izao dia tokony ho tena mendri-piderana. Fa Andriamanitra no hametraka ny maso antsika ihany koa ary izy naniraka an'i Kristy ho antsika. Araka ny Efesianina 2 hoy i, "Koa tsarovy fa indray mandeha ianareo jentilisa araka ny nofo… tsarovy fa tamin'izany andro izany tafasaraka amin'i Kristy, olon-ko azy tamin'ny fanjakan'ny Isiraely ary vahiny ny faneken'ny teny fikasana, dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa, ao amin'i Kristy Jesosy, ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampidirina akaiky noho ny ran'i Kristy. " (Efesianina 2:11-13 DIEM)
Derao Andriamanitra fa tsy handao antsika lavitra, tokoa fanantenana, ary raha tsy Izy. Tsy voatery hanao izany, fa araka ny fantatsika fa ny drafitra teny ampandehanana. Ary fantatsika izay mifarana ny tantara. Ny tantara mifarana amin'ny olona avy amin'ny firenena rehetra sy ny samy hafa fiteny niankohoka ny zanak'ondry miaraka ao amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. satria "amin'ny alalan'ny [ny] ra [izy] nanafaka ny olona ho an'Andriamanitra avy amin'ny foko sy fiteny sy vahoaka ary firenena" (Rev 5:9).
Koa izao no tokony hisy fiantraikany ny fomba miara-miaina toy ny tenan'i Kristy, na dia ankehitriny aza. Amin'ny maha vahoakan'Andriamanitra, tokony ho miezaka hanao ny fiainana miaraka amin 'ny fomba izay maneho eny ny drafitr'Andriamanitra mba hamonjy ny olona samy hafa. Indraindray ny fiangonako manao batisa isaky ny alahady maraina. Ary tiako ny hitraka any ka jereo samihafa ny olona manome fijoroana ho vavolombelona. Izy rehetra, samy hafa fiaviana, fa amin'Andriamanitra kosa mamonjy fahasoavana dia teo ihany ny rehetra. Izay mety azo lazaina amintsika eto androany. Mivavaka aho fa rehefa ny olona tonga eo amin'ny fiangonana, dia ho gaga ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny maro karazana samy hafa ny olona. Tsy voavonjy ianao noho ny taona na ny foko. Tsy misy fahaizana hafa noho ny hoe mahantra. Ary isika rehetra dia mahantra.
Be dia be ny hihaona aho ry namana tsy fantatro izany. Mihevitra izy ireo ihany Andriamanitra mamonjy ny olona roa karazana: na antitra na antitra dudes fotsy mainty renibe. Nefa izany tsy marina, marina? Soratra Masina mazava tsara fa "Izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena." Tsy hoe manan-karena ny olona, na mahantra ny olona, na ny olona antitra na ny tanora, na ny Jiosy na ny fotsy hoditra na mainty hoditra. No, Andriamanitra no nampahazo ny tolotra rehetra.
izahay, amin'ny maha-fiangonana, Tokony hatahotra ny manao na inona na inona izay mahatonga azy toa tahaka an'Andriamanitra ihany no mamonjy nisy karazana olona. Izany no zava-miafina ny tsara tarehy ny Fanekem-pihavanana Vaovao. Izay no iray amin'ireo voninahitra ny Filazantsara fa Andriamanitra no hamonjy izay mpanota, izay mametraka ny finoany an 'i Kristy. Izany dia midika hoe tsy mifantoka amin'ny na voafetra ho misy vondrona.
Amin'ny maha-fiangonana, dia mety tsy ny rehetra avy amin'ny toerana iray, ary mety tsy mitovy ny foko ambadika, fa misy zavatra lehibe kokoa ao iombonana. Isika ao amin'ny fanekena ilay Andriamanitra velona amin'ny alalan'i Kristy. Ary izany goavana.
Izany ihany koa no antony tokony handefa misionera, ary mivavaka ho azy ireo! Izany no mahatonga ny sasany amintsika Mila entana ny ny kitapo ka handeha! Satria Andriamanitra no nanao ny fifanekena vaovao, ary Izy no hita ny firenena. Nisy olona nilaza taminay sy ny olona mila handeha hilaza azy.
Koa na dia ny andinin-teny miresaka momba ny fanekena ny mpianakavin 'i Isiraely, fantatsika fa ny drafitra dia nitatra. Andeha hidera an'Andriamanitra noho miasa iraisam-pirenena. Inona marina manao izany asa mitovy? Ahoana no fomba hafa izany fanekempihavanana izany ho vaovao?
II. Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny firenena
"Hataoko ny lalàna ao an-tsainy sy hosoratako ao am-pony."
Tsy mino aho fa ny lahatsoratra dia miezaka ny hitaona ny sasany eto fahasamihafana goavana eo amin'ny fo sy ny saina. Mihevitra aho fa ny fampiasana fotsiny teny roa samy hafa izay miresaka fa Andriamanitra no mandeha manao zavatra ao anatiny antsika. Fandikan-teny hafa hoe: "Hataoko ao anatin'izy ireo ny lalàko, ary hosoratako ao am-pony izany."
Ary mazava ho azy ny fotoana voalohany Andriamanitra nanome azy ireo ny Lalàna, Nanoratra izy tamin'ny takela-bato. Fa Andriamanitra dia nanao hoe:, "Tsy misy, tamin'ity indray mitoraka ity ny manodidina aho handeha hosoratako ao am-pony eo. "Ny fotoana voalohany Andriamanitra nanome azy ireo ny lalàna, Ary nataony teo anoloan'izy ireo. Fa Andriamanitra dia nanao hoe:, "Tsy misy, ity indray mitoraka, Aho handeha tsainy ny lalàko ao anatiny ny azy ireo. "
Isika dia zatra ny fisainana ao am-po toy ny mafana, c-toerana ao anatiny. Tsy mifandray ny fo miaraka amin'ny fifandraisana sy ny Andron'ny Mpifankatia sy ny tantaram-pitiavana ny fitiavana. saingy, ara-Baiboly ny fo dia be mihoatra noho ny fihetseham-po fotsiny mushy toerana. Ao amin'ny Soratra Masina, ny fo manontolo no anaty olona. Izany dia ahitana ny fihetseham-po, fa koa ny saintsika, ny sitrapontsika, ary ny faniriantsika - ny zavatra rehetra izay mitranga ao. Ny teny hebreo hoe raha ny marina dia midika hoe kibony, satria izany no sary dia nampiasa. Mampiasa ny teny hoe fo.
Ny fo dia amin'ny fototra ny zavatra rehetra ataontsika. Izany dia tahaka ny GPS rafitra izay mitarika ny asa. Ny olana no NY tapaka. Ny mpanota fo mieritreritra diso, ary mahatsapa ny ratsy, ary maniry ny ratsy. Ary tsy mankatò an'Andriamanitra, satria amin'ny ny fototry ny hoe iza moa isika, izahay diso.
Na inona na inona nataoko aho tsy afaka hanandratra ny fisotroana. Ary na inona na inona misy mpanota no, ry zareo tsy afaka fotsiny hisikina ny hery mitandrina ny lalàn'Andriamanitra tanteraka.
Ary izany no mahatonga ny lalàn'Andriamanitra, toy ny tonga lafatra toy ny tamin'ny, tsy afaka hamonjy antsika. Izany no antony fotsiny milaza amintsika ny tokony hatao mety tsy ho ampy.
Toa toy ny amin'izao andro izao, be dia be ny fanehoan-kevitra manohana ny velona ratsy fitondran-tena fiainana dia mifandray amin'ny inona no voajanahary. Isika dia nateraka niaraka tamin faniriana sasany ka tsy maintsy ho tsara. Ahoana no afaka
Andriamanitra ve manana olana amin'ny zavatra izay mahatsapa tena tsara, na izay ho firaisana alohan'ny fanambadiana, na lehilahy miray amin'ny lehilahy, na misy fitondran-tena olana.
Ny marina dia ny fontsika dia tena torotoro sy sahiran-tsaina, fa ny ratsy mahatsapa tsara sy mahatsapa tsara ny ratsy. Rehefa ny mpivady hampahatezitra antsika dia mahatsapa marina eo amin'ny fotoana tsy hanaja azy ireo. Rehefa nihalehibe maloto fijerena clip, dia nahatsapa tsara hila an'ireo vehivavy teo amin'ny efijery. Raha ny vola miditra dia tsy tena marina dia mahatsapa tsara ny mamitaka kely fotsiny eo amin'ny hetra. Namitaka antsika ny fontsika. Raha ny marina eo amin'ny teny hafa ao amin'ny bokin'i Jeremia, voalaza, "Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra, ary mafy marary; iza moa no mahatakatra izany?" (Jeremiah 17:9 DIEM)
Tsy ampy ny manana ny lalàna, fa ny mpanota ihany no mamaly fo amin'ny fikomiana. Andriamanitra maintsy hanokatra antsika, ary hanome antsika fo ara-panahy taova.
Io asa anatiny eo amin'ny fototra io fifanekena vaovao, ary tokony hidera an'Andriamanitra noho izany. Raha Andriamanitra tsy hanolo-tena hiasa ao amintsika isika, dia mbola ho fanantenana. Filipianina 2 milaza amintsika, "Miasa hahazoanareo ny famonjena anareo amin-tahotra sy hovitra…" Nahoana? "Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny Amin'izay dia sy hiasa ny sitrapony. " (Filipianina 2:12-13 DIEM)
izany satria ny asany tao antsika fa isika dia miasa avy ny famonjena antsika. Afaka miasa ety ivelany fotsiny, satria Andriamanitra no miasa anatiny ao am-pontsika mba maniry sy ny hanao izay Izy no niantso antsika ho. Andriamanitra dia ny mpitari sy ny enabler eto. Tokony hidera an'Andriamanitra noho izany asa mahatalanjona.
Koa amin'ny fahazavana ny fahamarinana izany, izany mihitsy no tokony ho manao. Tokony ho miasa avy ny famonjena antsika. Tokony matoky eo amin'ny ady atao amin'ny fahotana, satria fantatrareo fa Andriamanitra no miasa ao anatintsika. Andriamanitra dia tsy hoe mipetraka any an-danitra didy barking avy amin'ny olony sy manameloka azy ireo rehefa tsy. Izy no tena miasa ao am-pontsika mba hanampy antsika hatoky sy hankatò. Tsy manana fialan-tsiny ho kamo fikatsahana an'Andriamanitra.
Angamba ianao amin'izao andro izao miady amin'ny fahotana sasany izay te ianao tsy afaka mandresy.
hamporisihana. Andriamanitra no miasa ao anatinareo. Ary Izy no matanjaka noho ny fahotana.
Amin'ny fiainako, Hitako izany mazava tsara. Tsy hoe tsy miady mafy intsony, saingy ny tena samy hafa. Afaka mahatsiaro ho tia ny fahotako. Ary avy eo Tsaroako ny fiovana izay tsy mampaninona ahy. Na dia talohan'ny nanomboka nanova ny fitondran-tena, Tsikaritro fa ny fomba tsapako, ary ny fomba Nihevitra aho, ary izay naniry dia nanova. Mety ho ny anatiny ihany no asan'Andriamanitra. Ary misy na inona na inona mamy noho mijery an'Andriamanitra hanao izany amin'ny olon-kafa. Satria dia afaka mifaly aho ka hanao hoe:, "Hey, Ary nanao izay ao amiko koa!"
Izany no tsy manam-paharoa izay karazana firaisan-tsaina ny Kristianina ihany no hikarakarana anjara. Andriamanitra no miasa ao anatiny antsika.
Tokony hidera an'Andriamanitra noho ny asany anatiny.
III. Andriamanitra dia miasa Interpersonally
Henoy ny tapany farany amin'ny andininy ity. hoy Andriamanitra,
"Izaho ho Andriamaniny,ary izy ho oloko. "
Ny fanekena fa Andriamanitra no manao dia tsy fifanarahana fotsiny. Tsy misy fifanarahana fotsiny Azy mba hanao zavatra tsara ho azy ireo. Io fanekempihavanana io dia miorim-paka ao amin'ny fifandraisana manokana amin'i ny vahoakany. Andriamanitra tsy hoe nampanantena ny hitahy antsika amin'ny zavatra, Izy no nampanantena fa hitahy antsika amin'ny tenany. Izy no Andriamanitsika. Izany dia midika hoe tsy tahaka sonia ny lease ho an'ny trano vaovao iray. Rehefa manao izany, ianao vao nampanantena tena amin'ny fandoavana ny tompon-tranon'i nandriatra isam-bolana. Izany dia midika hoe tsy mba tahaka izany. Misy manokana, nahavita ny fitiavana sy ny firaiketam-po teo amin'ny ny zavatra rehetra ho voninahitry ny vahoakany.
Ary misy anankiray karazana tompony tao. Izy no nividy antsika tamin'ny ran'ny Zanany ary an'i Azy. Mampahatsiahy ahy ny Ao amin'i Kristy Irery tsipika, "Fa Izaho no ny, ary Izy no ahy. Novidina tamin'ny ra sarobidin'i Kristy."Andriamanitra foana nitady manana fifandraisana manokana amin'ny ny vahoakany, ary izany dia ny hanohy amin'ny fifanekena vaovao izao.
Christian, ny hevitrao momba an'Andriamanitra ho Andriamanitrareo, na toy ny Andriamanitra fotsiny? Rehefa mieritreritra ny Andriamanitra no Izy fotsiny ny Mpamorona ny tany? Sa Izy ny Ray? Moa Izy ny Tia ny fanahinareo?
Satria ny fomba fiheveran'ny Azy manova ny fomba mamaly Aminy. Ary ny lehilahy amin'ny Isiraely dia tsy mba miaina toy ny Andriamaniny Izy. Nanompo sampy izy ireo. Tsy matoky izy ireo ny Teniny. Na inona na inona momba ny fomba fiainany fa izany no Andriamaniny. Ary na inona na inona momba ny fiainany hoy izy ireo ny vahoakany.
Ireo amintsika izay nanantena an'i Kristy rahateo dia ny vahoakany. Andriamanitra tsy laniny ny anarany eo amintsika. Ny zava-drehetra an'ny Azy, fa amin'ny fomba manokana Izy no nijery anay ka nanao hoe:, "Ahy izy ireo." Ary amin 'ny fiainantsika ny hanambara izany fahamarinana izany.
Ary nony niala Jesosy ka lasa ho any amin'ny hazo fijaliana toy ny mpisoronabe, Izy nanome antsika ny fidirana ho amin'ny Andriamanitry ny Izao Rehetra Izao. Manontany tena aho hoe ahoana no mety manova ny vavaka fiainantsika raha toa ka azon'izy ny marina fa Izy no Andriamanitsika ary isika no olony. Mihevitra aho fa ny Eksodosy izay ny olona nandevozina sy ny andinin-teny milaza, "Dia nandre ny fitarainany ka nahatsiaro ny fanekeny tamin'ny razany." Christian, Andriamanitra no nanao ny tenany ho antsika amin'ny fomba izay efa tsy nanao ny tenany amin'ny olona rehetra. Andriamanitra mihaino ny vavaka ary mamaly foana amin'ny fomba feno fitiavana. Izy no Andriamanitrao. Ianao dia iray amin'ireo vahoakany.
Manontany tena aho hoe mainka hahatsapa fampiononana izahay eo amin'ny fitsarana raha toa ka azon'izy ny marina fa Izy no Andriamanitsika ary isika no olony. Romanina 8 mampahatsiahy antsika fa na inona na inona afaka hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Mieritreritra Josefa, rehefa namidy ho andevo, ary milaza fa ny rahalahiny izay natao ho an'ny loza, Andriamanitra kosa nisaina ho soa. Na inona na inona karazana fitsapana izahay eo amin'ny, Andriamanitra ihany no hampiasa azy ireo noho ny tsara sy ny voninahiny. Izy no Andriamanitrao. Ianao dia iray amin'ireo vahoakany.
Mino aho fa amin'ny fiainako, ny fotoana tsy hahatakatra izany, Ataoko mihitsy no Brad niantso antsika tsy hanao izany maraina. Raha tokony hifikitra amin'ny fahamarinana fa Izaho no ny, ary Izy no ahy, I manomboka hamerina ny fiainako kristianina ho talenta fampisehoana; izay hanao an'Andriamanitra ary manao an 'ny tsara fahasoavana raha hanao tsara ampy. Fa rehefa hahatakatra ny marina fa Izy no Andriamanitro, ary izaho ny zaza, Te hankatò azy noho ny fitiavana sy amin'ny fankasitrahana noho ny fahasoavany. Tsy voatery hanao sy hanolotra ny tenako ho Azy. Andriamanitra no momba ahy. Iza no I mananihany? Izy miahy ny masina kokoa noho izaho manao. Izy no Andriamanitro. Izaho dia iray ny olony.
I afaka handeha sy ny. Saingy zava-dehibe, mba haka ny mihazona izany. Izy no Andriamanitsika ary isika no olony. Ary hidera Azy amin'ny hafa noho izany asa famonjena.
IV. Andriamanitra no any am-piasana
Mino aho fa manan-danja indrindra ao amin'io andalana io fehezan-teny dia teny kely roa no mety ho mifalihavanja ny, "Handeha aho." Hoy Andriamanitra, "Izay hanaovako fanekena vaovao." Hoy Andriamanitra, "Hataoko ao anatin'izy ireo ny lalàko." Hoy Andriamanitra, "Hosoratako ao am-pony izany." Hoy izy, "Izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko."
Ry rahalahy sy anabavy, Fanekem-pihavanana Vaovao izany amin'ny farany dia tsy miankina aminao. Manomboka sy mifarana amin'Andriamanitra. Andriamanitra no ilay nanana ny drafitra. Andriamanitra no ilay iray izay mamindra fo sy tsy nitondra anay nivoaka ny voalohany no nanota. Andriamanitra izay naniraka ny Zanany. Andriamanitra no izay nanidina ny fahatezerany tao amin'ny Kristy. Andriamanitra no ilay nanangana Azy tamin'ny maty. Andriamanitra no nanao anao izay olom-baovao. Andriamanitra no ilay nanome anareo ny Fanahiny. Andriamanitra no ilay nanome fo vaovao ianareo. Andriamanitra no ilay no manamasina anareo. Andriamanitra no ilay hiaro anao. Ary Andriamanitra no izay no hanomezany voninahitra anao. Izany fanekempihavanana izany dia manomboka sy mifarana amin'Andriamanitra.
Andriamanitra dia tapa-kevitra ny hanao ny tenany ho olona. Ary Izy nanao ny Tenany ho ny olona.
Amin'ny maha mpino izany dia tokony hitondra antsika fampiononana lehibe. Satria fantatsika fa ny tsy fankatoavana na dia tsy afaka handika izany fanekempihavanana. Na dia tsy afaka ny hadalana izany fanekena izany tsy. Satria Andriamanitra no miasa, Izy no nanao ny tenany ho antsika, ary tsy mety ho lany.
Ireo no tsara tarehy fitahiana izay avy amin'izao Fanekem-pihavanana Vaovao. Fa ny marina dia izany no fitahiana azo afa-tsy ireo izay ao amin'ny fanekempihavanana amin'Andriamanitra. Ary miditra ao fanekempihavanana amin'Andriamanitra rehefa mahatoky ny fiainana, fahafatesana, sy ny fitsanganana amin'ny maty ny Zanany, Jesoa Kristy. Raha fa aza mahalala an'i Kristy, miala ny ota sy mino Azy amin'izao fotoana izao. Raha tokony nanidina ny fahatezerany, Andriamanitra dia haidiny tsy takatry ny saina ny harena eo amin'ny lohany ho mandrakizay.
Mety jereo, fa ny sary toa voaloko awfully tonga lafatra. Ary ny marina dia tsy avy ireo endriky ny Fanekem-pihavanana Vaovao Niresaka momba ny dia ho tanteraka tsara raha isika miaraka Aminy. Rehefa miaraka Aminy isika dia hahita ny tonga lafatra, madio vadin'i Kristy iraisam-pirenena. Rehefa miaraka Aminy isika dia ho olona tonga lafatra, fo madio izay tia an'i Kristy sy ny lalany. Rehefa miaraka Aminy isika, isika dia hanana fifandraisana tanteraka Andriamanitsika, ary isika hanome voninahitra Azy ho toy ny vahoakany. Mandra-pahatongan'izany dia hanohy ary miezaka mba hatoky Azy bebe kokoa isan'andro. Andao hivavaka.